Abantu abangathembi - Kukuthinta kanjani ukuphila kwethu? | Bezzia
USusana godoy | 18/07/2021 18:00 | I-Psychology
Abantu abangathembi banomuzwa wokuthi abanakwethemba umuntu, noma cishe noma ngubani. Sikhuluma ngomuzwa ongemuhle noma umuzwa ongathinta izimpilo zethu cishe ungahlosile. Ngoba kuyiqiniso ukuthi akuyona into esingayilawula ngaso sonke isikhathi.
Kungakho namuhla kufanele singene ngokujulile kulo muzwa, kulokho okungasithinta ukuba singabethembi abantu futhi sicabange ukuthi nabanye banjalo. Konke lokhu nokunye okuningi ukuze sikwazi ukuqonda okunye kokuzwa esihlangabezana nakho nsuku zonke. Ingabe kwenzeka okufanayo nakuwe?
1 Kwenzekani lapho umuntu engathembi kakhulu
2 Yini ebangela umuntu ongathembi
3 Ungamsiza kanjani umuntu ongathembi
Kwenzekani lapho umuntu engathembi kakhulu
Uma singabantu abangathembi, kungenxa yokuthi lokho kuthembela okufanele kube khona kithina kunomugqa omncane kakhulu. Ngakho-ke uma ukungazethembi kuthina, kungaba yinkinga ukuze sakhe ubudlelwano nabanye. Uma kungokwabanye, khona-ke kuyafana. Njengoba lobu budlelwano bungeke benziwe ngesisekelo esiqinile ngoba kuyohlala kukhona ithunzi lokungabaza. Ngakho-ke, akulula ukuhlala ungabethembi abantu bebonke. Njengoba, ezimweni ezimbi kakhulu, singaze singabaze nabantu abakhombise uthando lwabo olungenamibandela kithina. Njengoba ingqondo, njengoba inamandla amakhulu kangaka, izosenza sikholelwe ukuthi asikufanele ngempela lokho okusizungezile.
Kufanele ukhumbule lokho umuntu ongathembi uhlupheka kakhulu. Uzohlala ngaso sonke isikhathi ehlaziya izimo, izingxoxo ngisho nezandla zomzimba bathini ngawe. Ngakho-ke lo muzwa udala isexwayiso, isimo sengcindezi ngaphezu kokuqhubeka, esibamakayo. Kwabaningi, luhlobo lwegobolondo abalakha ukuze bangahlupheki.
Yini ebangela umuntu ongathembi
Ngakolunye uhlangothi kungenzeka kube nomuntu owake walimala phambilini. Ngakho-ke, lapho umonakalo uqongelelaka, kunzima ukukwazi ukwethemba ngokuphelele ngokuphelele. Kuhlala kunokungabaza okuthile, ukungathembani nokuthi, uma ungasebenzi, kuzokwanda. Kepha ngakolunye uhlangothi akuhlali kukhona lowo monakalo kepha kumane kungathembani, umuzwa wokungabethembi ngokugcwele abantu abasizungezile. Lokhu kungenxa yalowo muzwa osidonsela emuva esikhundleni sokukwazi ukuqhubekela phambili. Ngakho-ke, singasho ukuthi abantu abethembi hhayi ngoba bekhethile, kepha ngoba banokwesaba okubavimbela ukuthi babone olunye uhlangothi lwemali.
Ungamsiza kanjani umuntu ongathembi
Ukuze sikusize uphume kulowo loop, akukho okufana nokuba ngabantu abacacile phambi kwabo. Lokho wukuthi, akukho ukuphambuka, ukutshela yonke into njengoba injalo futhi ngaso sonke isikhathi kukhombisa uhlangothi lwethu oluhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele uzame ukungazivikeli futhi uhlale ulalela lokho abanye abantu abakutshela khona. Ngakho-ke akufanele sibahlulele kuqala kepha silinde ukubona amaqiniso abo futhi sibekezele kancane. Lokhu kusivumela ukuthi sikunikeze umkhawulo wesikhathi ukuze ukwazi ukusikhombisa ukuthi ukuthembana kuzoba khona ngempela.
Akufanele sicabangele noma ngubani noma asenzele lokhu. Ngoba wonke umuntu uyawenza amaphutha, kepha kwesinye isikhathi cishe ngaphandle kokuqaphela noma amaphutha amancane. Ngakho-ke, kufanele ubekezelele futhi ungathembi abantu ngisho nangaphezulu. Elinye icebo okufanele lisetshenziswe ukuthi kufanele babe nezimo eziguquguqukayo, bangabeki umkhawulo, kodwa bavuleke ngokwengeziwe ngaphandle kwezimfuno eziningi. Ukuze ukhiqize ukuzethemba okukhulu kumuntu ongathembi, kufanele wenze okuningi futhi unikeze izenzo eziningi kunamazwi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » I-Psychology » Abantu abangathembeki: Kukuthinta kanjani ukuphila kwethu?